Gudoomiye ku xigeenka Baarlamanka Puntland oo dhaliilay dabaal-degga Yoga oo lagu qabtay Garowe – Kalfadhi
Gudoomiye ku xigeenka golaha wakiillada Puntland Avv. Cabdicasiis Abdullahi Cismaan ayaa si kulul u dhaliilay xuska dabaal-degga Yoga oo maanta lagu qabtay Garowe. Waxaa baraha bulshada qabsaday sawirro haween tiro badan oo ay ku jiraan masuuliyiin dowladda ka tirsan kuwaas oo meel dadweynuhu daawanayo ku jimicsanaya.
Haweenkani si wanaagsan ayay u lebisnaayeen, laakiin waxaa dadku aad u dhalillay in ay ku jimicsadaan meel dadweynuhu daawanayo isla markaasna sawirro laga qaadayo.
Gudoomiye Cabdicasiis ayaa yiri “Diinteenu waxay qabtaa qolo qofkii isku shabaha inuu ka mid yahay, hadii Ciyaarta Yoga ay tahay wax u gaar ah Hinduga oo ka mid ah dhaqankooda miyaanay ahayn qofka sidaas u dhaqmaa inuu la mid yahay hinduska”
Gudoomiyuhu wuxuu ka hadlay sida ay ula muuqdeen sawirrada uu ku arkay baraha bulshada; “Waxaa intaas dheer dadka aan sawiradooda arkay waxay u muuqdaan inay khushuucayaan” ayuu yiri.
Mudane Cabdicasiis wuxuu sheegay in dadka hawshaas ku lug lahaa looga baahnaa in ay ka shaqeeyaan waxyaalo kale oo muhiim ah. Wuxuu sheegay in ay masuuliyad weyni ka saaran tahay ilaalinta Diinta iyo dhaqanka.
Dadweynaha ayaa baraha bulshada ku dhaliilay xuska Yoga, qaarkood waxay sheegayaan in arrintani ay la xiriirto caqiido ay aamisan yihiin qaar ka mid ah Hindida. Safiirka Hindiya ee Soomaaliya oo beryahan Garowe ku sugnaa ayaa ka qaybgalay munaasabadda xuskan.
Docda kale, Munaasadda waxaa khudbad ka jeediyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullahi Deni